Isamsung iphendula nge-bang enkulu kumsebenzisi ogxeke i-Galaxy S8 | Iindaba zeGajethi
Kule mihla i Samsung Galaxy S8 Ilawula ubuninzi beqweqwe lewebhusayithi kunye namaphephandaba kwihlabathi liphela, kunye nokwaziswa kwayo kwintengiso. Umzekelo, eUnited States, iakhawunti ye-Twitter yakwa-Samsung (@SamsungMobileUS) ukhuthaze bonke abasebenzisi ukuba babelane ngesithombe sabo sokuqala abasithathileyo ngesixhobo sabo esitsha esitsha.
Njengoko kuqhele ukwenzeka kwezi meko, khange kuthathe xesha lide ukubonakala ngathi ungumsebenzisi ozimiseleyo ukunyathela kunye nokukhathazeka ixeshana. Kwaye ngaba uEdward othile (@Edward) uphendule komnye wemifanekiso epapashiweyo enomyalezo othi ifoto yakhe yokuqala yayiyeyelungu lakhe. Ngethamsanqa uluntu lwaseSamsung lwakhawuleza kwaye lwalunobuchule bokusishiya i-zasca ye-anthological.
Njengoko ubona ngezantsi komntu ophethe iakhawunti ye-Twitter Isamsung yaphendula kulo msebenzisi ngemicroscope emoji eyakhokelela kwinani elikhulu lamagqabantshintshi. Ewe kunjalo, akukho kwanto iyaziwayo malunga netroli ebihamba ngetroli, nangona mhlawumbi ethatha imifanekiso ngeSamsung yakhe entsha ye-S8 ukuze akwazi ukupapasha enye enomdla kwaye akwazi ukuphuma engxakini kunye neklasi.
Iya isanda ngokwesiqhelo iinkampani ukuba ziphendule ngendlela "enoburharha" kuzo zonke iitroll ezijikeleza kwinethiwekhi nangaphezulu kokubeka nganye kwindawo yazo, ngenxa yempembelelo ezihlala zinayo ezi mpendulo, kunye nentengiso yokuba cinga njengakule meko.
Ngaba ucinga ukuba iinkampani kufuneka ziqhubeke nokuphendula ngomsindo kubo bonke abo baphendula ngolona hlaselo lukhululekileyo?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Isamsung iphendula nge-bang enkulu kumsebenzisi ogxeke i-Galaxy S8
I-Apple kuya kufuneka ibuyisele ii-iPads ezonakalisiweyo ngeemodeli ezintsha eNetherlands